DDR kaas oo sidoo kale u taagan heerka xogta double waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo ugu horumarsan kaararka xusuusta in ay suuqa ugu jirtay muddo dheer hadda. Dhab ahaantii magaca asalka ah in la siiyay DDR waa DDRSDRAM sida DDR had iyo jeer ku xiran tahay SDRAM in ay ka shaqeeyaan. Gaabiyay waxay u taagan tahay xusuusta Double Data Rate Synchronous Mishiinkan Random Access. Waxaa jira tobanaan kun oo codsi ah SDRAM DDR ah iyo meesha ugu badan waa motherboard ee computer iyo gmail dhamaadka sare oo la soo saarayo arrintan la xiriira. Waxaa jira tiro fara badan oo versions of xasuusta DDR sida DDR1, DDR2, DDR3 iyo DDR4 oo ay tahay in la xuso in mid ka mid ahaa kaararka xusuusta waa u socdeen la jaan qaada kale taas oo macnaheedu yahay in RAM DDR1 ma shaqeyn doonto in motherboard in ay taageertaa dib version oo la mid ah ka dalban sare DDR ee.
Files Irrecoverable ka kaadhka xusuusta DDR
Kaararka xusuusta ee arrintan la xiriira waxaa lagu horumariyo jawi heer sare ah ay gacanta ku iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in gobolka adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa in dadka isticmaala oo sidaas daraaddeed kaararka xusuusta DDR suuq aad u weyn oo ay leeyihiin arrintan la xiriira . Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in dib u soo kabashada xogta la sameeyo ka kaararka xusuusta DDR hab jilicsan iyo xirfad sida kaararka heli doonaa musuqmaasuq haddii howsha sax ah aan loo samayn arrintan la xiriira sameeyo. Ka dib markii qaar ka mid ah sababaha ay sabab u tahay taas oo user a ma laga yaabaa in la hubiyo in files waxaa soo kabsaday:
1. maaraysay ka baxsan sharciga
Waa mid ka mid ah sababaha ugu xumaa ee soo gaartay xog ku saabsan RAM DDR. The naadi ee ka kooban yahay kaarka Biinanka yar in ay yihiin kuwo aad u jilicsan oo haddii ay dhacdo ee soo kabsaday xogta ku user ma aha oo kaliya helo kaarka ku hallaysay, laakiin sidoo kale in la hubiyo in xogta la marnaba baxey isticmaalaya hab dhaqameed iyo haddii ay taasi dhacdo markaas baahida user si loo hubiyo in gacmaha technology iyo xirfad heer sare loo isticmaalaa in lagu soo kabsado xogta si buuxda.
2.-gaadhista ah xaaladaha lama filaan ah
Waxaa ka mid ah gaadhista iftiinka toos ah markii la taaban karo, dhaawac biyo ama waxyeello jireed si kaarka oo kale ah oo dhan waxa loo arki karaa xaaladaha lama filaan ah. In light of arrimahan waa in la ogaadaa in user ma awoodi doonaan in ay dib u soo ceshano xogta laakiin sidoo kale ay horseedi karto in si joogto ah u shaqeynayaan hardware kaarka ah.
3. baadi Human
Waxaa jira sababo badan oo keeni kara in ay arrintan iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in markii kaarka waa akhriska ama xog qoraal ah ka dibna daryeel iyo tallaabooyin taxaddar ah la qaado si loo hubiyo in shuruudaha ugu fiican yihiin sameeyo bixiyo. Kaarka waa in aan marnaba la baxay booska halka xogta loo qoray oo ugu muhiimsan waa in aan la isticmaali karaa marka batari waa yar yahay ama ay jirto cabsi ah oo ay korontada lama filaan ah.
Soo Celinta aad DDR xasuusta Card la xasuusta DDR ee Software-kabashada Card ugu wanaagsan
Wondershare Data Recovery ayaa suuqa ugu jirtay tan iyo muddo dheer oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ma aha oo kaliya helo adeegyada ugu fiican ee arrintan la xiriira laakiin Wondershare kooxda taageerada weliba hubinayaa in gobolka adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa in dadka isticmaala ay gudahood markii jirin innaba. User xaq u baahan yahay in uu bixiyo hal mar si loo hubiyo in liisanka la iibsaday iyo marka la sameeyo user hadda hubin karaa in arrinta la xalin. Qorshahaa waxa dareen leh oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay in ay gundhig gudahood barnaamijka ee la hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa oo user helo adeegyada waafaqsan yihiin shuruudaha card ama hardware ka halkaas oo wax kaqabashada xogta loo baahan yahay. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa laga codsadaa si user helo natiijada waafaqsan shuruudaha:
1. user waa booqo URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html si loo hubiyo in barnaamijka sax loo xiray oo waxaa la samayn karaa iyadoo la raacayo Dardar ka muuqata inta lagu guda jiro rakibo oo kuwanu xasilloon sahlan tahay in la raaco:
2. riixayo badhan ee soo socda u muujin doonaa shaashadda soo socda halkaas user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in nooca file la cayimay mid kastaba:
3. Mar kale adiga oo riixaya badhanka ku xiga hubiyo in user helo screen cusub goobta khasaaraha file waxaa ku cad barnaamijka ay u shaqeeyaan oo ay helaan faylka ku jira qaybta in si fiican loo dhigi doonaa:
4. user ayaa xaqiijin kara in files la baxey yihiin si fiican u arkaan iyo marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylasha jecel yihiin riixi si ay u doortaan dibna badhanka soo kabsado la isku soo riixayo si ay u helaan wax ku sameeyo:
Faa'iidada iyo khasaaraha isticmaalka kaadhka xusuusta DDR ah
Kaararka xusuusta DDR jira qaab ciyaareed fiican oo inta badan boosaska badan ee qalab lagu kaydiyo oo ma aha oo kaliya helo natiijada ugu wanaagsan ee user, laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in xogta la ilaaliyo oo ay la socdaan daacadnimada. Si kastaba ha ahaatee sida ugu badan ee ay hindiseen this mid ka mid kale oo uu leeyahay waxtar iyo nuqsaan u gaar ah iyo sabab la mid ah qaybtan tutorial ah ayaa la siiyey si ay u mawduuca.
1. sharafta xogta ayaa la ilaaliyo marka kaadhka xusuusta DDR ah waxaa loo isticmaalaa sida boos iskula yihiin kuwo aad u adag in la qab qabto.
2. kaadhka xusuusta DDR waa inuu xaqiijiyo in user helo kaydinta ugu fiican taas oo la isku halayn karo, oo waari kara.
3. user wuxuu heli karaa adeeg ee kaarka xasuusta DDR fudayd iyo natiijada laga helayo ugu dhaqsiyaha badan.
1. Kaararka waa qadiimka oo sidaas daraaddeed taageerada waa sidoo kale dhamaadkii aad u sarreeya arrintan la xiriira, taas oo mararka qaar laga yaabo inay ka qaadaan sare.
2. Kaarka waxaa loo qoondeeyey in lagu hayo aragtida casriga ah dhamaadka sare ee isticmaala bixio iyo dadka isticmaala farsamo aan ahayn kaarka ma isticmaali karaa si fudud oo ku qanacsan.
> Resource > Memory Card > tallaabooyin sahlan si ay u qabtaan soo kabashada kaadhka xusuusta DDR ah